EPL Sack Race . . . ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ဘယျနညျးပွတှေ က အထုတျခံရဖို့ ရပေနျး အစားဆုံးလဲ ? - SPORTS MYANMAR
EPL Sack Race . . . ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ဘယျနညျးပွတှေ က အထုတျခံရဖို့ ရပေနျး အစားဆုံးလဲ ?
နိုငျငံ တကာ ပှဲစဉျ တှေ ပွီးဆုံး သှားပွီ မို့ ပရီးမီးယား လိဂျ အပါ အဝငျ ဥရောပ အမှတျပေး ပွိုငျပှဲ တှေ ပွနျလညျ စတငျ တော့ မှာ ဖွဈ ပါတယျ ။ ပှဲစဉျ ၈ ပှဲ အထိ ကစား ပွီး ခြိနျ မှာတော့ အသငျး အခြို့ ဟာ ထငျမှတျ မထား လောကျအောငျ ရလဒျ တှေ ဆိုးရှား နကွေပွီး နညျးပွ တှရေဲ့ ထိုငျခုံ တှေ ကလညျး လှုပျခတျ လကျြ ရှိကွ ပါတယျ ။
ဘရနျဒနျ ရျောဂြာ ရဲ့ လကျစတာ စီးတီး ဟာ ဒီနှဈ ရာသီ အဖှငျ့ မှာ ရလဒျတှေ ကောငျး နခေဲ့ပွီး ထိပျဆုံး လေးသငျး စာရငျး ကို ပငျ ခွိမျးခွောကျ လာခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ယခငျ တုနျးက အသငျးကွီး တှေ ကို ဒုက်ခ ပေးနေ တဲ့ ၀ုဗျ ကတော့ မနျစီးတီး ကို အနိုငျ မကစားခငျ မှာ ရလဒျတှေ ဆကျတိုကျ ကဆြငျး နပွေီး တနျးဆငျး ဇုနျနား မှာ ၀ဲနေ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
လီဗာပူး ရဲ့ မွို့ခံ ပွိုငျဘကျ ဖွဈပွီး EPL ရဲ့ အလယျ အလတျ အဆငျ့ အသငျး တဈသငျး ဖွဈတဲ့ အဲဗာတနျ ကတော့ ဒီနှဈ အဖှငျ့ မှာ တျောတျောလေး ဆိုးရှား နကော အန်တရာယျ ဇုံထဲ ကို ရောကျရှိ လို့ နခေဲ့ ပါတယျ ။ အားလုံး ထကျ ပိုပွီး အခွအေနေ ဆိုးနေ တာကတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ဖွဈကာ ၈ ပှဲ ကစား အပွီး မှာ အဆငျ့ ၁၂ အထိ ရောကျရှိ လို့ နခေဲ့ ပါတယျ ။
လာမယျ့ တနင်ျဂနှေ နေ့ မှာတော့ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ဟာ လီဗာပူး နဲ့ ရငျဆိုငျ ကစား ရမှာ ဖွဈ ပါတယျ ။ ဒီရာသီ မှာ လီဗာပူး ဟာ အလှနျကောငျး နပွေီး ၈ ပှဲ စလုံး ကို အနိုငျ ရကာ အဆငျ့ ၁ မှာ ရပျတညျ နပေါတယျ ။ အသငျး ၂ သငျး အကွားက ခွစှေမျး ပိုငျး ကှာခွားမှု ကွောငျ့ ယူနိုကျတကျတို့ အိမျကှငျးမှာ ဂိုးပွတျ ရှုံးနိမျ့ ဖို့ ရှိနေ သလို နညျးပွ ဆိုးရှား လညျး အထုတျ ခံ ရနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ ထငျမွငျခကျြ တှေ ပျေါထှကျ လာခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ဘှတျကီ ဒိုငျတှေ မှာတော့ ဆိုးရှား ဟာ ထုတျပယျ ခံ ရဖို့ အတှကျ ရပေနျး အစားဆုံး နညျးပွ မဟုတျ ခဲ့ ပါဘူး ။ ၀ကျဖိုဒျ့ ၊ နယူးကာဆယျ ၊ အဲဗာတနျ နညျးပွ တှေ နဲ့ အတူ ထုတျခံ ရဖို့ ရပေနျး အစားဆုံး ၅ ဦး ထဲ မှာ တော့ ဆိုးရှား ပါဝငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ အထုတျ မခံရနိုငျတဲ့ သူတှေ စာရငျး မှာတော့ ဖရနျ့ လမျးပတျ ၊ ယာဂငျ ကလော့ နဲ့ ပကျ ဂှာဒီယိုလာ တို့ က ဦးဆောငျ နခေဲ့ ပါတယျ ။
အခု ဖျောပွမယျ့ စာရငျး ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂျ ကနေ ထုတျပယျ ဖို့ အလေး အမြားဆုံး အပေး ခံထား ရတဲ့ နညျးပွ ဆယျဦး ရဲ့ စာရငျးပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
၁၀ ။ အကျဒီ ဟောငျး ( ဘုနျးမောကျ ) – ၄၀/၁
၉ ။ ရိုငျး ဟော့ဆနျ ( ပဲလစျေ့ ) – ၃၃/၁
၈ ။ ခရဈဈ ၀ိုငျးဒါး ( ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ ) – ၃၃/၁
၇ ။ ဒနျနီရယျ ဖာကီ ( နောဝှဈချြ ) – ၂၅/၁
၆ ။ ဟာဆနျဟော့ ( ဆောကျသမျတနျ ) – ၁၆/၁
၅ ။ စတိဗျ ဘရုဈ ( နယူးကာဆယျ ) – ၁၄/၁
၄ ။ ဆနျးခကျြ ဖလျောရကျဈ ( ၀ကျဖိုဒျ့ ) – ၁၄/၁
၃ ။ ပိုခကျြတီနို ( စပါး ) – ၅/၁
၂ ။ အိုလီ ဂနျနာ ဆိုးရှား ( မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ) – ၂/၁
၁ ။ မာကို ဆေးလျဗား ( အဲဗာတနျ ) – ၁/၁
ဘယျ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ အရငျဆုံး အထုတျခံ ရမလဲ ဗြာ . . . . .
EPL Sack Race . . . ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ဘယ်နည်းပြတွေ က အထုတ်ခံရဖို့ ရေပန်း အစားဆုံးလဲ ?
နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ် တွေ ပြီးဆုံး သွားပြီ မို့ ပရီးမီးယား လိဂ် အပါ အ၀င် ဥရောပ အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲ တွေ ပြန်လည် စတင် တော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ပွဲစဉ် ၈ ပွဲ အထိ ကစား ပြီး ချိန် မှာတော့ အသင်း အချို့ ဟာ ထင်မှတ် မထား လောက်အောင် ရလဒ် တွေ ဆိုးရွား နေကြပြီး နည်းပြ တွေရဲ့ ထိုင်ခုံ တွေ ကလည်း လှုပ်ခတ် လျက် ရှိကြ ပါတယ် ။
ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာ ရဲ့ လက်စတာ စီးတီး ဟာ ဒီနှစ် ရာသီ အဖွင့် မှာ ရလဒ်တွေ ကောင်း နေခဲ့ပြီး ထိပ်ဆုံး လေးသင်း စာရင်း ကို ပင် ခြိမ်းခြောက် လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ယခင် တုန်းက အသင်းကြီး တွေ ကို ဒုက္ခ ပေးနေ တဲ့ ၀ုဗ် ကတော့ မန်စီးတီး ကို အနိုင် မကစားခင် မှာ ရလဒ်တွေ ဆက်တိုက် ကျဆင်း နေပြီး တန်းဆင်း ဇုန်နား မှာ ၀ဲနေ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ရဲ့ မြို့ခံ ပြိုင်ဘက် ဖြစ်ပြီး EPL ရဲ့ အလယ် အလတ် အဆင့် အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်တဲ့ အဲဗာတန် ကတော့ ဒီနှစ် အဖွင့် မှာ တော်တော်လေး ဆိုးရွား နေကာ အန္တရာယ် ဇုံထဲ ကို ရောက်ရှိ လို့ နေခဲ့ ပါတယ် ။ အားလုံး ထက် ပိုပြီး အခြေအနေ ဆိုးနေ တာကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဖြစ်ကာ ၈ ပွဲ ကစား အပြီး မှာ အဆင့် ၁၂ အထိ ရောက်ရှိ လို့ နေခဲ့ ပါတယ် ။
လာမယ့် တနင်္ဂနွေ နေ့ မှာတော့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ လီဗာပူး နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီရာသီ မှာ လီဗာပူး ဟာ အလွန်ကောင်း နေပြီး ၈ ပွဲ စလုံး ကို အနိုင် ရကာ အဆင့် ၁ မှာ ရပ်တည် နေပါတယ် ။ အသင်း ၂ သင်း အကြားက ခြေစွမ်း ပိုင်း ကွာခြားမှု ကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့် ဖို့ ရှိနေ သလို နည်းပြ ဆိုးရှား လည်း အထုတ် ခံ ရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက် တွေ ပေါ်ထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဘွတ်ကီ ဒိုင်တွေ မှာတော့ ဆိုးရှား ဟာ ထုတ်ပယ် ခံ ရဖို့ အတွက် ရေပန်း အစားဆုံး နည်းပြ မဟုတ် ခဲ့ ပါဘူး ။ ၀က်ဖိုဒ့် ၊ နယူးကာဆယ် ၊ အဲဗာတန် နည်းပြ တွေ နဲ့ အတူ ထုတ်ခံ ရဖို့ ရေပန်း အစားဆုံး ၅ ဦး ထဲ မှာ တော့ ဆိုးရှား ပါဝင် ခဲ့ ပါတယ် ။ အထုတ် မခံရနိုင်တဲ့ သူတွေ စာရင်း မှာတော့ ဖရန့် လမ်းပတ် ၊ ယာဂင် ကလော့ နဲ့ ပက် ဂွာဒီယိုလာ တို့ က ဦးဆောင် နေခဲ့ ပါတယ် ။
အခု ဖော်ပြမယ့် စာရင်း ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကနေ ထုတ်ပယ် ဖို့ အလေး အများဆုံး အပေး ခံထား ရတဲ့ နည်းပြ ဆယ်ဦး ရဲ့ စာရင်းပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
၁၀ ။ အက်ဒီ ဟောင်း ( ဘုန်းမောက် ) – ၄၀/၁
၉ ။ ရိုင်း ဟော့ဆန် ( ပဲလေ့စ် ) – ၃၃/၁
၈ ။ ခရစ်စ် ၀ိုင်းဒါး ( ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် ) – ၃၃/၁
၇ ။ ဒန်နီရယ် ဖာကီ ( နောဝှစ်ခ်ျ ) – ၂၅/၁
၆ ။ ဟာဆန်ဟော့ ( ဆောက်သမ်တန် ) – ၁၆/၁
၅ ။ စတိဗ် ဘရုစ် ( နယူးကာဆယ် ) – ၁၄/၁
၄ ။ ဆန်းချက် ဖလော်ရက်စ် ( ၀က်ဖိုဒ့် ) – ၁၄/၁
၃ ။ ပိုချက်တီနို ( စပါး ) – ၅/၁
၂ ။ အိုလီ ဂန်နာ ဆိုးရှား ( မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ) – ၂/၁
၁ ။ မာကို ဆေးလ်ဗား ( အဲဗာတန် ) – ၁/၁
ဘယ် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ အရင်ဆုံး အထုတ်ခံ ရမလဲ ဗျာ . . . . .